နအဖ ၏ ကြိုတင်ကြံစည် မဲမသမာမှု များကြောင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ များ နှင့် ပြည်သူတို ့လမ်းပေါ်ထွက်တော့ မည်
မဲပေးရန် လာသူများ ကို ကြံ့ဖွံ ့က ခြိမ်းခြောက်မဲပေးခိုင်းမှု များ ရှိသည်
စစ်အာဏာရှင် က ကျောထောက်နောက်ခံပေး ထားသည့် အကြမ်းဖက်
အဖွဲ ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သော ကြံ့ဖွံ ့အဖွဲ ့က နိုဝင်ဘာလ ရ ရက်နေ ့က ကျင်းပ ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲ
တွင် နည်းမျိုး စုံ နှင့် မဲ မသမာ မှု များ သုံးခဲ့ မှု များ ကြောင့် ပြိုင်ဘက် ပါတီ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း
များ ရှုံး နိမ့် ခဲ့ရသည်ဟု ရန်ကုန် မြို ့မှ မဲ ရုံ မှုး တစ်ဦးက Freedom News Group သို ့ပြောသည်။
DKBA ဗိုလ်မှုးချုပ် စောလားပွယ် ၏ တပ်ဖွဲ ့ဝင်များ မြဝတီ မြို ့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်
လက်နက် ကြိးများ ထိုင်း နိုင်ငံထဲ ထပ်မံကျရောက် လျှင် မြန်မာ နိုုင်ငံဘက်သို ့ပြန်လည်ပစ်
ခတ်ရမည် ဟု ထိုင်း စစ်တိုင်းမှုး ပြော
မြဝတီ ဘက်ကမ်းတွင် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ထိုင်း စစ်သားများ အသင့်နေရာယူနေရစဉ်
မြန်မာ စစ်တပ်မှ ပစ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီး ကျဉ် ထိုုင်းနိုင်ငံထဲ သို ့ကျရောက်ပေါက်ကွဲစဉ်
နေ ့လည် ၁း၁ဝ ထိုင်းလူမျိုးသုံး ဦး လက်နက်ကြီး ကျဉ်ထိ မှန် မှု ကြောင့် ပြင်းထန် စွာ ဒဏ်ရာရ
နေ ့လည် ၁းဝဝ ထိုင်း ပြည်သူများ ထိမှန် မှု ကြောင့် ထိုင်း အမှတ် ၅ ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဆူပါချော့ကီ သာဝတ် ပီရာချိုင်း နှင့်
အဖွဲ ့လာရောက် တပ်ဆွဲ
၁၁းဝဝ မြဝတီ မြို ့တွင်း တိုက်ပွဲ များ ပိုမိုပြင်းထန် လာ နေပြည်တော် မှ ဓာတု လက်နက် တင်ဆောင် လာသည့်
ရဟတ် ယာဉ် မြဝတီ မြို ့သို ့ရောက် ရှိ ဟု ထိုင်း ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ တစ်ဦးက FNG သို ့ပြော
၁ဝး၄၅ မြဝတီမှာ ယောက်ကျားတွေအားလုံးပြေးရပြီ စစ်တပ်က ပေါ်တာအတွက် လိုက်လံဖမ်းဆီးနေ
နံနက် ၁ဝး၃၅ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ ့ဝင်လေးဦး မဲဆောက်ဆေးရုံရောက်-မြဝတီ ခယက ဥက္ကဌ အား DKBA အဖွဲ ့ဝင်များ
ဖမ်းဆီးထား (မြဝတီ – ကော့ကရိတ် ကားလမ်း ရှိ တံတားများကို ချိုး ပြီး စစ်တပ် က ဆုတ်ခွာ)
Updated နံနက် ၁ဝး၃ဝ မြဝတီ-မဲဆောက် နှစ်မြို ့လုံး မှ စာသင်ကျောင်းများ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်း
ထိုင်-မြန်မာ နယ်စပ် ကရင် ပြည်နယ် မြဝတီ မြို ့အား DKBA ဗိုလ်မှုး ချုပ် စောလားပွယ် (နှုတ်ခမ်းမွေး) ၏တပ်များ
က ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက် မှု ကြောင်း ယနေ ့မနက် ၉း၃ဝ အချိန် တွင် နှစ်ဖက် တပ်များ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှု
များ ဖြစ်ပွားရာ မြဝတီ မြို ့မှာ လက်နက်ကြီး ကျဉ် ပေါက်ကွဲ သံများ ၊သေနတ် ပစ်ခတ် သံများ ဖြင့် ဆူညံနေပြီး
သင်္ကန် းညီနောင် တွင် မူ နအဖ စစ်တပ် က အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများ ကို ဓားစားခံ လုပ်ထား သည်
ဖင်တုကို မှန်ပြောင်းနဲ့ချောင်းကြည့်နေတာလားဟင် ? ပြောမယ့်သာပြောရတာ
သူ့ကို ဝန်ကြီးချုပ်ပေးလုပ်မယ်သာဆိုလို့ကတော့ချက်ချင်းတောင်ချွတ်ပြီး ကပြ မလားမသိဘူးနော်
ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော် ဖင်ဆော့တယ် ကမျင်းတယ်ကြားတယ်။
အခုလည်း ဘယ်အဘကို ကုန်းထားပြီး လာအမတ်လုပ်နေလဲမသိဘူး။
ဒိုးကလေးရေ လုပ်ပါအုံး.. ပိုစ်တွေလိမ်ကုန်ပြီလားမသိဘူး။ ဖင်တုကြီးပျောက်သွားပြီ လုပ်ကြပါအုံး။
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဒင်းတို့နဲ့ အမဲ စက်ပေါင်း များပြီ…မှားနေတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
နိုင်လည်းအထင်မကြီးဘူုး။ ရှုံးလည်းမသနားဘူး။ ဒို့ကတော့ ဒေါ်စုရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုပဲ လက်ခံတယ်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အား
ဦးဆောင် သမ္မတ ပြု သင့်သူမှာ
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ပင်ဖြစ်လေတော့၏
သင်တို့သိပ်မအော်နေကြကုန်လင့်
မမျှော်လင့်သောအကြောင်းကြောင့် အဓိကရုန်း တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော်
မည်သည့် နေရာမှ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ကြမည်ကို
ဟေ့ တို့ကတော့ .. ပြိုင်ဖက် မရှိအောင် .. ဘယ်သူမှလဲ မယှဉ်နိုင်အောင် .. နေပြည်တော် ဇုံကပဲ အရွေးခံတယ် .. ဒါတောင်မှ ဟိုလူ လုပ်လို့ ပယ်မဲ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ မဲ ၃၈ မဲ ပါလာတာ .. အမယ်လေး .. အမြန် ကာဗာ လုပ်နိုင်လို့ .. နို့မဟုတ်ရင် ကျုပ်ကို ကန့်ကွက်တဲ့လူ ရှိတယ်လို့ ရာဇဝင် တွင်သွားဦးမယ် .. ဘာမှသလဲ ..
ကျွန်တော့်အဖြစ်ကတော့ အိမ်မှာလဲ မဲပေးဖို့နာမည်မပါ… အဆောင်မှာလဲ နာမည်မပါ… ဟိုမရောက်… သည်မရောက်နဲ့…. မဲ ပေးချင်လွန်းလို့မှ ဖလန်းဖလန်းထပြီး မနက်အစောကြီးမဲရုံမှာသွားစောင့်နေတာ.. ပီးတော့ နာမည်လဲပါဘူး…. သေချာတာကတော့ ခမောက်(NDF) ကိုပဲပေးမှာပဲ..
မနေ့က မဲရုံမှာအဖွားကြီးတစ်ယောက်ပြောနေတာကြားရတယ်.. အဖွားဘယ်သူ့ကိုမဲပေးလိုက်လဲလို့မေးတော့..
ဟဲ့..ခြင်္သေ့အောက်မှာဘာရှိလဲ.. ေ-ွးဥပဲရှိမှာပေါ့.. ခမောက်အောက်မှာ ဘာရှိလဲ.. ခေါင်းရှိတယ်.. ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်စဉ်းစား.. ဟိုဒင်းကိုမဲပေးမလား ခေါင်းရှိတာကိုမဲပေးမလားလို့.. အဲ့သလိုပြန်လည်ဖြေကြားတာကိုလဲကြားလိုက်ရပါတယ်
အဓီပါယ်ရှိလိုက်တဲ့ စကားလေး..ပါပဲ။…………ဒါပေမဲ့ ဂွေးဥကြိုက်တဲ့ အဆိုး(စိုး) ရ က သူမိန်းမတွေအတွက် .ဂွေးဥကို ပဲ အနိုင်ပေးလိုက်ပါပြီး..။
ဟေးမင်းတို့ပြောနေတဲ့ဖင်တုဆိုတာဘာလဲတွေ့လဲမတွေ့ဘဲနဲ့ မြဝတီမှာတော့ပွဲကျန်းနေပြီ ပြည်သူတွေဘေးကင်းကြပါစေ….